Izigaba ku-Windows News
En Izindaba zeWindows uzothola inani elikhulu lezinsizakusebenza zekhompyutha yakho ye-Windows. Yonke imininingwane nokufundiswa kohlelo lwakho lokusebenza, izindaba zakamuva nezibuyekezo ezivela kwa-Microsoft kanye nezinsiza ezingcono kakhulu ze- isofthiwe namathuluzi.
Inhloso yethu ukwenza leli kona libe umthombo wakho wolwazi ukuze ube nekhompyutha esheshayo, elungiselelwe futhi evikelekile. Konke okuqukethwe kwethu kubhalwe ngu ithimba lethu lokuhlela, Isazi seWindows.
Iziphequluli kanye ne-Intanethi